ताप्लेजुङ्गमा पहिलोपटक एपेण्डीसाइटिसको अपरेसन: निक साइमन्स इन्स्टिच्यूट
27 Mar, 2017 By: डा. उत्तम पाच्या
ताप्लेजुङ्ग पूर्वाञ्चल क्षेत्रको अन्तिम, अरुको तुलनामा सबैभन्दा विकट र हिमाली जिल्ला मध्येमा पर्दछ । यहाँको स्वास्थ्य सूचकहरु विगतमा कम नै देखिन्छन् । केही वर्ष देखि फाट्टफुट्ट सिजरियन सेक्सन (पेट चिरेर बच्चाको डेलीभरी गर्ने शल्यक्रिया) भए पनि अरु अपरेसन भएका थिएनन् । निक साइमन्स इन्स्टिच्यूटको सहयोगमा म मेडिकल जनरलिस्ट, मेडिकल अधिकृत, एनेस्थेटिक असिष्टेन्ट साथै स्टाफ नर्स ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा कार्यरत छौं । सो टिम तथा अस्पतालका अरु चिकित्सक तथा प्यारामेडिक्सले अस्पतालको सेवा बढाउन हरदम प्रयास गरिरहेका छौं । यहाँको टिमको अथक प्रयासले केही नयाँ सेवा तथा अपरेसन गर्नलाई मद्दत पुग्यो र त्यसको फलस्वरुप एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्न सकियो ।
बिहान ८ बजे तिर एक जना २१ वर्षकी बिरामी जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आइन् । उनको दुखाईलाई पेन किलर दिएर केही हदसम्म आराम भएपछि मैले जाँच गरे । मलाई एपेण्डिसाइटिसको शंका लाग्यो तर उनी महिला भएको कारणले भित्री जेनेन्द्रीयको समस्यालाई सोच्नु पर्ने थियो । यो बेलासम्म अस्पतालको आफ्नै अल्ट्रासाउण्ड मेशिन थिएन र एक जना स्टाफको मेडिकलबाट अल्ट्रासाउण्ड मेशिन ल्याएर उनको भिडियो एक्सरे भयो र जेनेन्द्रीय समस्या नभएको निर्कौल गरियो ।
हामीले अपरेसन गर्ने सल्लाह दियौं । बिरामी र उनका आफन्त दोधारमा परे । सल्लाह मानौ यस रोगको अपरेसन पहिलो पटक हुँदैछ । नमानौं ज्यान जाने जोखिम । तल झापा जाउञ्जेलसम्म एपेन्डिक्स फुट्ने हो कि भन्ने डर थियो । उनका श्रीमानले अपरेसन ताप्लेजुङ्ग अस्पतालमै गर्नलाई निर्णय दिए । बिरामी र बिरामीको ससुराले मंजुरीनामा दिए । उनको सफलतापूर्वक एपेण्डीसाइटिसको अपरेसन भयो र अर्को दिन पोस्टअप वार्डमा मुस्कुराउँदै हाम्रो टोलीलाई धन्यवाद दिइन् । उनलाई अपरेसन गरेको तेश्रो दिनमा घर पठाइयो । यो अपरेसनमा मलाई डा. गुरु पौडेल र डा. ललित जंग शाहीले साथ दिएका थिए । अपरेसन टोलीमा एनेस्थेसियमा जगत राजबंशी, नर्स हाङ्गशु लिम्बु र सहयोगीमा इन्द्र बुढाथोकी थिए ।
अपरेसन सानो या ठुलो होस् टीमवर्कको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । बिना टीमवर्क कुनै अपरेसन सफल हुन गाह्रो हुन्छ त्यसमा पनि ताप्लेजुङ्ग जस्तो दुर्गम ठाउँमा यो अपरेसन जटिलताको हिसाबले मध्यम खालको मानिन्छ । मध्यम खालको भए पनि यो ताप्लेजुङ्ग अस्पतालको लागि पहिलो थियो र ताप्लेजुङ्गबासीको लागि यो ऐतिहासिक थियो ।
अहिले हामी आफ्नो ज्ञानसिपले भ्याएसम्म सबै किसिमका रोगको उपचार गर्दैछौं । यहाँ सम्भव नहुने रोगलाई अन्य ठुला अस्पतालमा रिफर गर्छौं । धेरै बिरामीहरु उपचारकै कारणले ठुला अस्पताल जानु परेको छैन । प्रसुति सम्बन्धी बिरामीहरु बिरलै रिफर गर्नु परेको छ । यसले गर्दा जनताको उपचारको अलावा आर्थिक भार पनि निकै कटौती भएको छ । यसको लागि अस्पतालको टिम, अस्पताल ब्यवस्थापन समिति तथा जनताको बिश्वासको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
एम.डि.जि.पि., ताप्लेजुङ्ग जिल्ला अस्पताल